Sugitaanka Godot: rinjiyeyn muujineysa sabab la’aanta dadnimada | Suugaanta Hadda
Juan Ortiz | 16/09/2021 00:48 | La cusbooneysiiyay 16/09/2021 01:18 | Qorayaasha, Buugaag, Masraxa
Sugitaanka Godot (1948) waa riwaayad masraxa caqliga xun oo uu qoray Irishman Samuel Beckett. Dhammaan heesaha ballaaran ee qoraaga, tan “Tragicomedy in two act” - sida hoosta looga dhigay - waa qoraalka leh aqoonsiga ugu weyn adduunka oo dhan. Waxaa xusid mudan in ay ahayd gabalkii si rasmi ah Beckett ugu soo bandhigay caalamka masraxa, waxayna ku kasbatay abaalmarinta Nobel Prize ee Suugaanta 1969kii.
Xaqiiqda xiisaha leh ayaa ah in Beckett - oo ah nin aad u xiiseeya luuqadda iyo cilmi -nafsiga - uu adeegsaday luqadda Faransiiska si uu u qoro shaqadan. Maaha wax aan micne lahayn daabacaadda ee cinwaanka Waxaa lagu daabacay astaanta ku hadasha afka Faransiiska Les Éditions de Minuit, afar sano kadib markii la qoray (1952). Sugitaanka Godot Waxaa lagu soo bandhigay masraxa Janaayo 5, 1953, Paris.
1 Soo koobid shaqada
1.1 Tallaabada koowaad
1.1.1 Godot: sababta sugitaanka
1.1.2 Imaanshaha Pozzo iyo Lucky
1.1.3 Farriin niyad jebinaysa oo dheereynaysa sugitaanka
1.2 Falka labaad
1.2.1 Soo laabasho leh isbeddello ba'an
2 Sugitaanka falanqaynta Gogdot
2.1 Xirfadda fududaynta
2.2 Wax kasta oo dhaca, waxba ma beddeli doonaan masiirka ragga
2.3 Godot ma aha Ilaah ...
2.4 Nolosha: loop
3 Faallooyinka ka soo baxay dhaleeceeyayaasha khaaska ah ee Sugitaanka Godot
4 Sugitaanka Godot trivia
5 Sugitaanka weedhaha Godot
Soo koobid shaqada
Beckett wuxuu u qaybiyay shaqada hab fudud: laba fal.
Qaybtan, goobtu waxay muujinaysaa Vladimir iyo Estragon oo imanaya marxalad ay ka kooban yihiin «Waddo berrinka ah. Geed. - Waxyaabahan ayaa la ilaaliyaa inta ay shaqadu socoto - Hal galab. ” Jilayaasha ayaa labbisto xaragoon iyo xaragoon leh, taas oo ka dhigaysa in laga yaabo inay noqdaan dad bilaa hoy ah, maadaama aan wax la taaban karo laga aqoon iyaga. Meesha ay ka yimaadeen, wixii hore u dhacay iyo sababta ay sidan ugu labistaan ​​waa qarsoodi guud.
Godot: sababta sugitaanka
Waxa run ahaantii la og yahay, shaqaduna ay mas'uul ka tahay in si fiican loo ogaado, waa taas waxay sugaan “Godot” gaar ah". Waa kuma? Cidina ma ogaSi kastaba ha ahaatee, qoraalka ayaa ku siinaya dabeecaddan hal -abuurka leh awood uu ku daweeyo dhibka kuwa isaga sugaya.
Sugitaanka Godot: ...
Imaanshaha Pozzo iyo Lucky
Iyaga oo sugaya kan aan imaan, Didi iyo Gogo - sida loo yaqaan jilayaasha sidoo kale - wada hadal ka dib wada hadalku wuxuu ku wareegaa wax aan macno lahayn wuxuuna ku haftaa wax aan jirin ee "ahaansho". Muddo ka dib, Pozzo - milkiilaha iyo sayidka meesha ay ku socdaan, sida uu sheegay - iyo addoonkiisa Lucky ayaa ku soo biira sugitaanka.
Pozzo waxaa loo sawiraa sida taajirkii caadiga ahaa ee hodanka ahaa. Markay timaaddo, wuxuu xoogga saaraa awoodiisa wuxuuna isku dayaa inuu muujiyo is-xakamaynta iyo kalsoonida. Si kastaba ha noqotee, markii waqtigu ku gubto xanta, waxay u sii caddaan doontaa in - sida jilayaasha intiisa kale - ninka milyaneerka ah uu ku dhacay isla murugada: ma yaqaan sababta ama sababta jiritaankiisa. Nasiib, dhankiisa, waa qof is -hoosaysiiya oo ku tiirsan, addoon ah.
Farriin niyad jebinaysa oo dheereynaysa sugitaanka
Marka maalinta ay ku dhowdahay inay dhammaato iyada oo aan la haynin wax muujinaya in Godot imaan doono, wax lama filaan ah ayaa dhacaya: ilmo ayaa soo muuqda. Midkani wuxuu ku sii dhowaanayaa halka ay Pozzo, Lucky, Gogo iyo Didi ku meeraysanayaan y wargeliyaa taas, Haa OK Godot ma imanayo, Aad bay u badan tahay muuqaal samee maalinta xigta.
Vladimir iyo Estragon, Warkaas ka dib, waxay ku heshiiyaan inay soo noqdaan subaxdii. Kama tanaasulaan qorshahooda: waxay u baahan yihiin, kharash kasta, si ay ula kulmaan Godot.
Sidii loo yidhi, isla dhacdadan ayaa weli taagan. Geedka, oo laamihiisa calool -xumada leh, ayaa si qoto dheer u jirrabo si loo isticmaalo loona joojiyo caajiska iyo caadooyinka. Didi iyo Gogo ayaa ku soo laabanaya goobtaas oo ku celcelinaya rafaadkooda. Si kastaba ha ahaatee, wax ka duwan ayaa dhacaya marka la barbardhigo maalintii hore, taasina waa inay bilaabaan inay ogaadaan inuu jiray shalay, maaddaama ay calaamadihii ay meesha joogeen cad yihiin.
Waad hadli kartaa markaa miyir ku meel gaar ah, inkastoo, ficil ahaan, wax walba lagu celceliyo; nooc ka mid ah "Maalinta Groundhog."
Soo laabasho leh isbeddello ba'an
Nasiib iyo sayidkiisii ​​soo noqo, hase yeeshee, waxay ku sugan yihiin xaalad aad u kala duwan. Addoonkii hadda waa carrab la 'yahay, Pozzo wuxuu la il daran yahay indho la'aan. Hoos -u -dhacan is -beddellada xag -jirka ah, rajada imaatinku way sii jirtaa, waxaana la socda wada -hadallo aan ujeeddo lahayn, oo macno -darro ah, sawirka sabab la’aanta nolosha.
Sida maalin ka hor, rasuulkii yaraa ayaa soo noqda. Si kastaba ha ahaatee,, markii ay su’aalo weydiiyeen Didi iyo Gogo, the ilmuhu wuu dafiraa inuu la joogay shalay. Maxaa haa ku celi mar kale waa isla warkii: Godot ma imaan doono maanta, laakiin waa macquul in berri uu yimaado.
Astaamaha mar kale ayay is arkaan, iyo inta u dhaxaysa niyad -jab iyo qoomamo, Waxay ku heshiiyeen inay soo noqdaan maalinta xigta. Geedka cidlada ah ayaa weli ku sii jiraya astaanta is -dilka si looga baxo; Vladimir iyo Estragon way arkaan oo way ka fikiraan, laakiin waxay sugaan inay arkaan waxa “berri” keeni doono.
Sidan shaqada ayaa ugu dambaysa, siinta waxa noqon kara loop, taas oo aan ahayn wax aan ahayn maalinba maalinta ka dambaysa ee aadanaha iyo waxa jimicsiga buuxa ee miyir -qabka uu ugu yeero "nolol."
Falanqaynta Sugitaanka Gogdot
Sugitaanka Godot, lafteeda, waa shaqo -ka -bax inagu soo jiidaya waxa ay tahay maalinba maalinta ka dambaysa ee aadamaha. Caadiga labada ficil ee qoraalka —Marka laga reebo hal ama mid kale oo marmar isbadala- waa ku celcelin joogto ah taasi waxba ma samaynayso laakiin waxay tusaysaa socodka aan la hagaajin karin ee qof walba, talaabo talaabo, qabrigiisa.
Waxay ku jirtaa fududaanta shaqada, in kasta oo ay u muuqato hal -ku -dheg, halkaas oo aqoontiisu ku taal, halka ay maalkiisu taal: rinjiyeynta sabuuradaha oo ka turjumaysa sabab la'aanta ku xeeran ninka.
In kasta oo Godot-oo muddo dheer la sugayay, kan la sugayay-uusan weligiis soo muuqan, joogitaankiisa ayaa is-tusinaysa masiibada caqli-xumada jiritaanka aadanaha. Waqtiga masraxa wuxuu sababtiisa ku helayaa falal, in kasta oo ay u muuqdaan kuwo aan caqli -gal ahayn, inaysan ka fiicnaan doonin kana xumaan doonin kuwa kale, maxaa yeelay kii laga filayay, sidaas oo kale, ma iman doono.
Wax kasta oo dhaca, waxba ma beddeli doonaan masiirka ragga
Riwaayadda waa isku mid in la qoslo ama la ooyo, neefso ama ha neefsan, daawo galabtii oo dhimata ama geedka qallalan, ama noqo mid leh geedka iyo muuqaalka. IYO midkoodna ma beddeli doono aayaha gaarka ah: imaanshaha la'aanta.
Godot ma aha Ilaah ...
Xigasho Samuel Beckett
In kasta oo sannadahaas oo dhan ay jireen kuwa sheeganaya in Godot uu isagu Ilaah yahay, Beckett wuu beeniyay sababayntaas. Waa hagaag, in kasta oo ay ku xirayaan nuxur ahaan sugitaanka joogtada ah ee aadanaha ee ilaahnimada dhaqammada kala duwan, iyagoo adeegsanaya isku -dheelitirnaanta fudud ee erayga Anglo Ilaahow, runtu waxay tahay in qoraagu tilmaamay magacu wuxuu ka yimid codka francophone -ka godillot, taasi waa: "boot", af Isbaanish. Sidaa daraadeed, maxay filayeen Didi iyo Gogo?
Sidoo kale waxaa jiray kuwa xiriiriyay rasuulkii Godot iyo Masiixa dhaqanka Yuhuudda-Masiixiga, halkaasna caqli ayaa ka jira. Laakiin iyada oo la tixgelinayo waxa uu sheegay qoraagu, aragtidan ayaa iyadana la tuuraa.
Dhamaadku ma noqon karo mid la jaanqaadi kara inta kale ee lagu soo kiciyay shaqada, hubaal. Markaa waxaad dib ugu noqotaa bilowgii, haddana waxaad heshaa garashada inaad tahay, in shalay la sugayey, sidii ama ka dhiig badan yahay maanta, laakiin aan ka yarayn berri. Oo kan dhahaya waa inuu yimaadaa wuu inkiraa inuu yiri shalay ayuu sheegay, laakiin wuxuu ballan qaadayaa inay dhici karto berri ... iyo wixii la mid ah, ilaa neefta ugu dambeysa.
Faallooyinka ka soo baxay dhaleeceeyayaasha khaaska ah Sugitaanka Godot
«Waxba ma dhacaan, laba jeer«, Vivian Mercier.
“Waxba ma dhacaan, qofna ma yimaado, qofna ma tago, waa wax laga naxo!«, Anonymous, ka dib markii lagu soo bandhigay Paris sanadkii 1953.
"Sugitaanka Godot, ka macquulsan wax aan macquul ahayn". Mayelit Valera Arvelo
Waxyaabaha xiisaha leh ee Sugitaanka Godot
Dhaliilaha Kenneth Burke, kadib markii aan arkay riwaayadda, Wuxuu caddeeyay in xiriirka ka dhexeeya El Gordo iyo El Flaco uu aad ugu ekaa kan Vladimir iyo Estragon. Kaas oo aad u macquul ah, isagoo og in Beckett uu ahaa taageere Baruurtii iyo caatadii.
Asalka badan ee cinwaanka, waxaa jira mid dhahaya Beckett wuxuu la yimid isagoo ku raaxaysanaya Tour de France. In kasta oo xaqiiqdu tahay in tartanku dhammaaday, haddana dadku weli way filayeen. Samuel wuxuu weydiiyey: "Yaad sugaysaa?" iyo, si aan gabasho lahayn, waxay uga jawaabeen dhagaystayaashii "To Godot!" Odhaahdu waxay tilmaamaysaa tartamahan laga tagay oo aan weli iman.
Dhamaan jilayaasha Way sitaan koofiyad ah koofiyad saxarada. Taasina ma aha shil Beckett wuxuu ahaa taageere Chaplin, sidaas waxay ahayd dariiqa ay ku maamuusayso. Waana shaqada dhexdeeda wax badan oo ka mid ah shineemada aamusan, inta badan waxa jidhku sheegayo, waxa ay muujiso, iyada oo aan xakamayn, aamusnaanta. Arrintan, agaasimaha tiyaatarka Alfredo Sanzol ayaa ku sheegay wareysi lala yeeshay El Pais ka yimid Spain:
“Waa wax lagu qoslo, wuxuu tilmaamaa in Vladimir iyo Estragon ay xirtaan koofiyadaha kubbadda koleyga waana sababtaas awgeed marka dhammaan masraxyada ay mar walba xirtaan koofiyadaha kubbadda koleyga. Waan iska caabinayey. Xaqiiqdu waxay tahay inaan isku dayay koofiyadaha iyo noocyada kale ee koofiyadaha, laakiin ma aysan shaqayn. Ilaa aan ka dalbaday labo ka mid ah kuwa kubbadaha ciyaaraya iyo, dabcan, waa inay xirtaan kubbadaha. Koofiyada bowler waa Chaplin, ama Spain, Coll. Waxay kiciyaan tixraacyo badan. Aniga waxay ii ahayd cashar khushuucda ”.
Iyadoo Sugitaanka Godot waxay ahayd tii ugu horreysay ee si rasmi ah loo Beckett masraxa, waxaa jiray laba isku day oo hore oo aan hirgelin. Mid ka mid ah wuxuu ahaa riwaayad ku saabsan Samuel Johnson. Midda kale waxay ahayd Eleutheria, laakiin waa la tirtiray kadib markii Godot soo baxay.
Xigasho Sugitaanka Godot
“Ballantii waan ilaalinay, taasi waa intaas. Awliyo ma nihin, laakiin ballantii waan ilaalinay. Imisa qof ayaa sidaas oo kale sheegi kara?
“Ilmada adduunku waa mid aan la beddeli karin. Mid kasta oo bilaabay inuu ooyo, qayb kale waxaa ku jira mid kale oo joojiya inuu sidaa sameeyo ”.
“Waxaan xusuustaa khariidadihii Dhulka Quduuska ah. Midab ahaan. Mid aad u fiican. Badda Dhimatay waxay ahayd buluug cirro leh. Waan harraadsanaa aniga oo eegaya uun. Wuxuu igu yiri: halkaas ayaan aadi doonnaa si aan u soo qaadanno malabkayaga. Waan dabaalan doonnaa Waan ku farxi doonaa ".
“VLADIMIR: Tan waxaan ku dhaafnay waqtiga. ESTRAGON: Waxay ahaan lahayd sidii hore, si kastaba. VLADIMIR: Haa, laakiin dhakhso badan ”.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Noocyada » Masraxa » Sugitaanka Godot
Leon Felipe. Sanad guuradii geeridiisa. Gabayada qaarkood
Christie Agatha. Sanad guuradii dhalashadiisii. Xulashada weedhaha